SOMA oo Tababbar Barnaamijka Wadaaga soo Gabagabaysey (sawirro) – Radio Daljir
SOMA oo Tababbar Barnaamijka Wadaaga soo Gabagabaysey (sawirro)
Noofember 8, 2017 1:00 b 0
Ururka SOMA ayaa maanta Muqdisho ku soo xiray tababbar ku saabsan waxsoosaarka raadiyaha (Barnaamijka Wadaagga), kaasi oo ay si wadajir ah u soo qabanqaabiyeen Radio Ergo iyo Ururka Warbaahinta Soomaaliyeed (Somali Media Association SOMA) oo ah Urur ay ku mideysan yihiin Qaybaha kala duwan ee Warbaahinta. Tababarkan oo socday mudo Saddex maalmood ah ayaa waxaa ka qeybgalay Wariyeyaal ka kala yimid in ka badan 20 Idaacadood oo ku kala yaalla magaalooyinka Muqdisho, Boosaaso, Gaalkacyo, Doolow, Dhuusa-mareeb, Caabud-waaq, Cadaado, Baardheera, Beledweyne, Baydhabo, Balcad, Jowhar iyo Magaalooyin kale.
Munaasabadda lagu soo xirayay Tababarkan ayaa waxaa ka qeyb galay Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya C/raxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yariisow), La Taliyaha Wasaaradda Warfaafinta C/raxmaan (Koronto), Guddoomiyaha SOMA Maxamed C/laahi Kooshin, Guddoomiyaha Ururrka SOCENCA Diini Maxamed Diini, Agaasimeyaal, Qubaro Saxaafadeed, Wariyeyaal iyo xubno kale.
Guddoomiyaha SOMA Maxamed Cabdullaahi Cali Kooshin oo ugu horeyn khudbad ka jeediyay goobta ayaa sheegay in SOMA la aasaasay 2013-kii, ayna ku mideysan yihiin ilaa 40 Idaacadood oo Soomaaliya ka hawlgala, waxaana ujeedada loo aasaasay ay aheyd in la sameeyo urur ay ku mideysan yihiin warbaahinta madaxa banaan, kana shaqeynaya danta iyo hormarka shacabka Soomaaliyeed.
Waxa uu sheegay ururkan sanadkii 2016-kii in uu bilaabay Barnaamij gaar ah oo wadaag ah, kaasi oo loogu tala galay in Idaacadaha ku mideysan SOMA ay wadaagaan xogaha iyo warbixinada, islamarkaana ay u gudbiyaan bulshada inteeda kale.
Guddoomiye Kooshin ayaa sidoo kale sheegay Idaacadaha ku mideysan SOMA go’aankooda in uu yahay ka shaqeynta hormarka dadka iyo dalka iyo in dadka wax lagu soo kordhiyo, ayna yihiin warbaahin wax dhista ee aan ka shaqeyn dhibaatada.
Sidoo kale wuxuu sheegay Tababarkan loo soo gaba gabeeyay Wariyeyaasha inuu wax badan ka bedeli doono xirfadooda, wuxuuna kula dardaarmay in wariyeyaasha ay kale ay uga faa’ideeyaan.
Guddoomiyaha ururka SOCENCA Diini Maxamed Diini oo isaguna goobta ka hadlay ayaa sheegay in SOCENCA ay bahwadaag la tahay SOMA, mar walbana ay iskala shaqeeyaan arrimaha hormarka u ah bulshada Soomaaliyeed.
Wasiirka Warfaahinta Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaliya C/raxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yariisow) oo Munaasabadda soo xiray ayaa sheegay Dowladda Soomaaliya mar walba in ay ka shaqeyneyso sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta iyo xirfadda Wariyeyaasha Soomaaliyeed.
Wariyeyaasha maanta Tababarka loo soo gaba gabeeyay ayuu ugu baaqay aqoontii ay barteen in ay uga faa’ideeyaan Suxufiyiinta kale ee Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa xarumaha ay iskala shaqeeyaan.
Ugu dambeyntii Wariyeyaashii ka qeyb galay Tababarkan ay qabatay SOMA ayaa waxaa la gudoonsiiyay shahaadooyin muujinaya in ay aqoon ka kororsadeen mudadii uu socday Tababarkan.
Ururka SOMA ayaa sidan oo kale bilo kahor wuxuu qabtay tababar ku saabsanaa waxsoosaarka Raadiyaha (Barnaamijka Wadaagga), kaasi oo ay ka qeyb galeen Wariyeyal ka kala yimid Gobolada dalka, kuwaasi oo wax badan ka kororsaday.